Nkọwapụta Ngwaahịa | Ntuziaka maka Okwu Mmepụta - Mepụta - Createmepụtaproto Tech Co., Ltd.
IHE AKA / Ndepụta Okwu
Enwere ọtụtụ okwu ụlọ ọrụ iji hazie n'ichepụta ihe. Nyochaa nkọwa okwu anyị maka nkọwapụta ngwa ngwa nke usoro nrụpụta a na-eji eme ihe na acronyms.
Standarddị faịlụ kọmputa dị iche iche maka ịgbanwee data CAD, nke a na-ahụkarị site na mmemme AutoCAD. ACIS bu aha achoputara na mbu “Andy, Charles and Ian’s sistem.”
Mgbakwunye n'ichepụta, 3D-ebi akwụkwọ
A na-ejikarị ya eme ihe, mmepụta ihe (3D obibi) gụnyere ụdị CAD ma ọ bụ nyocha nke ihe a na-emepụtaghachi, akwa site na oyi akwa, dị ka ihe anụ ahụ nwere akụkụ atọ. Stereolithography, nhọrọ laser sintering, ihe ntinye ihe eji etinye ya na ihe eji emepụta laser bụ ụfọdụ n'ime usoro mgbakwunye mgbakwunye ọrụ.
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ "oghere," ọ bụ ọkara nke ebu na -emepụtakarị mputa akụkụ nke ịchọ mma. A-n'akụkụ anaghị enwe akụkụ ndị na-akpụ akpụ wuru n'ime ya.
Nke a bụ oghere nke kwekọrọ na ntụgharị nke mgbanwe nke akụkụ tụgharịrị, mana ọ dịghị mkpa ka ọ tụkwasị ya obi.
A akụrụngwa nke ọgwụ-ịkpụzi igwe na nke resin pellets na-agbaze, abịakọrọ na agbara n'ime ebu si ọsọ usoro.
N'iji abrasives n'ime ikuku gbawara iji mepụta udiri elu n'akụkụ.
A makwaara dị ka "chamfer," ọ bụ akụkụ dị larịị dị larịị.
Ezughị okè nke ịchọ mma nke etinyere ebe a na-agbanye resin ahụ, a na-ahụkarị ya dị ka nsị na-achacha achacha n'akụkụ saịtị nke ọnụ ụzọ ámá.
Ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe ndi ozo ma obu nkwado nke akuku ozo na-agabiga ha.
Bridge ngwá ọrụ
Oge na-adịru nwa oge ma ọ bụ nke obere oge maka nzube nke imepụta akụkụ mmepụta ruo mgbe nrụpụta nrụpụta dị elu dị njikere.
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ "isi," ọ bụ ọkara nke ebu ebe ndị nkedo, cams na-arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya dị. N'akụkụ ịchọ mma, B-akụkụ na -emepụtakarị akụkụ ahụ.
Mee ikpo okwu
Nkwado isi na igwe mgbakwunye ebe etinyere akụkụ. Ogologo nke otu akụkụ dabere na nha nke ikpo ihe igwe. Ọtụtụ oge usoro ikpo okwu ga-etinye ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke jiometrị dị iche iche.
A atụmatụ na ebu na undercut. Jectchụpụ akụkụ ahụ, ọ ga-ehulata ma ọ bụ gbatịa gburugburu undercut.
Otu akụkụ nke ebu a na-agbanye n'ime ya ka ebu ahụ na-emechi, na-eji ihe eji eme ihe nkiri cam. Dịka, a na-eji omume n'akụkụ iji dozie ụzọ dị n'okpuru, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ iji kwe ka mgbidi na-enweghị atụ na-enweghị mgbidi. Ka ebu ahụ meghere, akụkụ ahụ na-adọpụ n'akụkụ ahụ, na-ekwe ka ewepụ akụkụ ahụ. A na-akpọkwa "arụ ọrụ n'akụkụ."
Oghere dị n'etiti A-n'akụkụ na B n'akụkụ nke jupụtara iji mepụta akụkụ nkedo ahụ. A na-akpọkarị A-akụkụ nke ebu oghere oghere.
A makwaara dị ka "bevel," ọ bụ akụkụ dị larịị dị larịị.
Ike achọrọ ijide ebu ahụ ka resin ghara ịgbaba n'oge ogwu. Ihe ọ̀tụ̀tụ̀ na tọn dị ka '' anyị nwere narị igwe asaa. ''
Ejector atụdo na nsọtụ ekara ka dakọtara a sloping elu na akụkụ.
Otu akụkụ nke ebu na-abanye n'ime oghere iji mepụta ime oghere oghere. A na-ahụkarị ihe mkpuchi na B-akụkụ nke ebu, yabụ, a na-akpọ B-isi mgbe ụfọdụ isi.
Ihe edozi na ebu nke na-emepụta ihe na-adịghị mma na akụkụ ahụ. Ọ na-adịkarị mfe igwe igwe pin dị ka ihe dị iche ma tinye ya na A-n'akụkụ ma ọ bụ B n'akụkụ dị ka achọrọ. A na-ejikarị igwe eji emezi ihe eji edozi aluminium iji mepụta ihe toro ogologo, nke di nkpa nke puru ibu ihe ojoo ma oburu na eme ya site na nnukwu aluminom nke ebu.
Okwu eji kọwaa ebu emepụtara site na nkedo akụkụ A na akụkụ B.
Oge ọ na - ewe iji mee otu akụkụ gụnyere imechi ihe ebu ahụ, ntụtụ nke resin ahụ, ime ka akụkụ ahụ sie ike, mmeghe nke ebu na ịpụpụ akụkụ ahụ.
Metalgba ogwe osisi laser (DMLS)
DMLS na-arụ ọrụ sistemụ fiber laser nke na-adọta n'elu ala ntụ nke atom, na-agbanye ntụ ahụ n'ime ihe siri ike. Mgbe nke ọ bụla gasịrị, agụba na-agbakwunye ntụ ntụ ọhụrụ ma meghachi usoro ahụ ruo mgbe e guzobere akụkụ ikpeazụ nke metal.
Direction nke sere
Ntuziaka nke ebu na-agagharị mgbe ha na-esi n'akụkụ akụkụ ahụ pụọ, ma mgbe ebu ahụ mepere ma ọ bụ mgbe akụkụ ahụ na-apụ.
A mpempe akwụkwọ etinyere na ihu nke akụkụ nke na-egbochi ha ịdị ka ngagharị nke mmeghe ebu. Nke a na-egbochi akụkụ ahụ ka ọ ghara imebi n'ihi ịkpụcha ya ka a na-achụpụ akụkụ ahụ na ebu.
Ọtụtụ plastik na-amịrị mmiri ma na-akpọ nkụ tupu a kpụzie ya iji hụ na ihe ịchọ mma dị mma na njirimara ihe.
Ule nke ike nke ihe. Ọ tụrụ na a ọnụọgụ ọgụgụ sitere na site na ala (softer) ka elu (ike).
Oghere oghere kwekọrọ na akara nkewa nke ebu ebe resin na-abanye n'ime oghere ahụ. A na-etinye ọnụ ụzọ ámá dị n'akụkụ ọnụ nke akụkụ ahụ.
Igwe na-ekpofu ọkụ eletrik. A akpụzi usoro nke nwere ike ịmepụta ogologo, thinner ọgịrịga karịa igwe, ederede n'elu ọgịrịga na square n'èzí n'ọnụ n'akụkụ.
Oge ikpeazụ nke usoro ntanye-ntanye ebe a na-akwagharị akụkụ ahụ agwụ site na iji ntụtụ ma ọ bụ usoro ndị ọzọ.
Ngwunye arụnyere na B-akụkụ nke ebu ahụ na-agbanye akụkụ ahụ pụọ na ebu ahụ mgbe akụkụ ahụ ajụọla nke ọma.
Ego ole ihe nwere ike ịgbatị ma ọ bụ gbanwee tupu ọ mebie. Ngwongwo a nke LSR na-enye ohere ka akụkụ ụfọdụ siri ike wepụ ya na ebu. Dịka ọmụmaatụ, LR 3003/50 nwere elongation na nkwụsịtụ 480 percent.
Ngwụcha igwe nri
Ngwá ọrụ e ji egbutu ya.
Electro static orùrù. Mmetụta eletriki nwere ike ime ka ọ dị mkpa igbochi ụfọdụ ngwa. Specialfọdụ akara ule pụrụ iche nke plastik na-eduzi ma ọ bụ na-agbasa ma na-enyere aka igbochi ESD.
A ebu ebe ihe karịrị otu oghere na-abanye n'ime ebu iji kwe ka otutu akụkụ nke otu ihe ahụ mee n'otu usoro. Dịka, oghere ọ bụla na-etolite nọmba dị iche iche. Hụkwa “ebu ọtụtụ ihe.”
Ihu ihu gbagọrọ agbagọ ebe ọgịrịga na-ezute mgbidi, ezubere iji meziwanye usoro nke ihe ma kpochapụ nrụgide nrụgide igwe na akụkụ agwụla.
Specificdị ụdị ọgwụgwọ dị elu nke etinyere na ụfọdụ ma ọ bụ ihu niile nke akụkụ ahụ. Usoro ọgwụgwọ a nwere ike ịmalite site na mma, na-egbu maramara ka ọ bụrụ ihe atụ dị egwu nke nwere ike ikpuchi ezughị oke elu ma mepụta akụkụ ka mma ma ọ bụ nke ka mma.
Mkpụrụ resin iji guzogide ọkụ
Resin nke na-abanye n'ime ọdịiche dị mma na nkewa nke ebu iji mepụta akwa oyi akwa nke plastik ma ọ bụ roba silicone.
Ngosipụta a na-ahụ anya na akụkụ gwụchara nke na-egosi nrịba plastik n'ime ebu tupu ebu agha.
Resins ma ọ bụ ebu ntọhapụ ịgba na-mma maka ojiji na imewe nke akụkụ ga-kpọtụrụ nri na ha ngwa.
Ntughari ihe ntinye aka (FDM)
Na FDM, a na-esi na isi nbipụta wepụta eriri waya nke ihe eji eme ihe n'ime akụkụ akụkụ nke na-esote n'ụdị akụkụ atọ.
Okwu okike maka uzo nke ebu ebe resin na abanye na ebu ebu.
Iju juru. Nke a na-ezo aka na resin nke nwere eriri iko a gwakọtara n'ime ya. Mpempe akwụkwọ ndị juputara na iko siri ike ma sie ike karịa resin kwekọrọ na ya, mana ha na-emebi emebi.
Ọgịga triangular nke na-eme ka mpaghara dị ka mgbidi na ala ma ọ bụ onye isi ruo n'ala.
Hot n'ọnụ ụzọ ámá
Ọnụ ụzọ ámá pụrụ iche nke na-agbanye resin n'ime ihu na A-n'akụkụ nke ebu. Typedị ọnụ ụzọ a anaghị achọ onye na-agba ọsọ ma ọ bụ sprue.
Nkọwapụta Eserese Eserese Mbụ. Ọ bụ ụdị faịlụ nkịtị maka ịgbanwere data CAD. Protolabs nwere ike iji IGES siri ike ma ọ bụ faịlụ dị elu iji mepụta akụkụ ndị akpụzi.
Omume nke ịmanye resin a wụrụ awụ n'ime ebu ahụ iji mepụta akụkụ ahụ.
A akụkụ nke ebu na arụnyere na-adịgide adịgide mgbe machining ebu isi, ma ọ bụ nwa oge n'etiti ebu cycles.
Akara akara nke resin na-abanye na ebu na oke ọsọ, na-emekarị n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá.
A makwaara dị ka "eriri akara" ma ọ bụ "eriri weld," na mgbe ọnụ ụzọ ámá dị iche iche dị, "akara meld." Ndị a bụ ezughị okè n'akụkụ ebe ihe dị iche iche nke ihe dị jụụ na-ezukọ ma soro na-esonye, ​​na-ebutekarị nkekọ na / ma ọ bụ akara a na-ahụ anya.
Ọkpụrụkpụ oyi akwa
Kpọmkwem ọkpụrụkpụ nke otu mmako oyi akwa nke nwere ike iru obere ka microns mkpa. Ọtụtụ mgbe, akụkụ ga-enwe ọtụtụ puku akwa.
Liquid injection ịkpụzi, nke bụ usoro eji na ịkpụzi nke mmiri mmiri silicone roba.
Omume igwe dịka igwe eji arụ ọrụ na lathe ebe ngwa ọrụ na-agbanwe agbanwe na-ewepu ihe na ngwaahịa. Nke a na-enye ohere ịmepụta atụmatụ dịka flats, grooves, oghere, na oghere axial ma ọ bụ radial iji mepụta n'ime lathe.
Ndụ mgbabere uzo
Akụkụ dị ezigbo mkpa nke plastik na-ejikọ akụkụ abụọ ma debe ha ọnụ ma kwe ka ha mepee ma mechie. Ha choro nlezianya anya na ntinye uzo. Typicaldị ngwa ga-abụ elu na ala nke igbe.
Liquid sịlịkọn roba.
Resin nwere ike ịdị mma maka iji ya rụọ ọrụ ụfọdụ.
Na-eme mgbe ọtụtụ ọnụ ụzọ ámá dị. Ndị a bụ ezughị okè n'akụkụ ebe ihe dị iche iche nke ihe dị jụụ na-ezukọ ma soro na-esonye, ​​na-ebutekarị nkekọ na / ma ọ bụ akara a na-ahụ anya.
Mgbanwe na imewe akụkụ nke chọrọ naanị mwepụ nke ọla site na ebu iji mepụta geometry chọrọ. A kachasị mkpa mgbe a akụkụ imewe na-gbanwere mgbe ebu e arụpụtara, n'ihi na mgbe ahụ ebu nwere ike ju karịa kpamkpam re-machined. A na-akpọkarị ya "nchekwa ọla."
Ebu tọhapụ ịgba
A mmiri mmiri etinyere na ebu dị ka ịgba iji kwado ikwupu nke akụkụ si B-n'akụkụ. A na-ejikarị ya eme ihe mgbe akụkụ ndị ahụ siri ike ịpụ n'ihi na ha na-arapara na ebu.
Multi-uji eze ebu
A ebu ebe ihe karịrị otu oghere na-abanye n'ime ebu iji kwe ka e nwee ọtụtụ akụkụ n'otu okirikiri. Dịka, ọ bụrụ na akpọrọ ebu “ọtụtụ oghere,” oghere ndị ahụ niile bụ otu akụkụ ahụ. Hụkwa “usoro ezinụlọ”
The ikpeazụ chọrọ udi nke a akụkụ; ma ọ bụ ọdịdị nke na-achọghị ọrụ ịkpụzi ọzọ tupu ojiji.
Ihe nkedo a kwadoro na njedebe nke gbọmgbọm nke nkedo na-akpụzi ebe resin na-abanye na sprue.
Nke a bụ oghere nke na-etinye uche na usoro mgbanwe nke akụkụ tụgharịrị. Ọ bụ naanị oghere na njedebe nke otu akụkụ na etiti.
Ihe otutu ihe ewepu site na akuku, nke a na njedebe nke ihe juputara, nke jikotara ya na obe. A na-agbakwunye ụda ahụ iji melite ogo akụkụ ma wepụ ya dị ka ọrụ nke abụọ.
Omume nke iji nrụgide dị elu mgbe ị na-agbanye akụkụ iji manye plastik ọzọ n'ime ebu. A na-ejikarị nke a alụ ọgụ ma ọ bụ jupụta nsogbu, mana ọ na-emekwa ka ohere nke flash wee nwee ike ime ka akụkụ ahụ rapara na ebu.
Filedị faịlụ maka ịgbanwee data CAD.
Nkebi A / Nkebi B
LSR bụ ngalaba abụọ; a na-edebe ihe ndị a iche iche ruo mgbe usoro ịkpụzi LSR ga-amalite.
Ọnụ nke akụkụ ebe ebu na-ekewa.
Ihe ntinye ntanye nke na-anọgide na-arapara n'akụkụ akụkụ ahụ ewepụtara wee wepụ ya n'akụkụ ma weghachite ya n'ime ebu ahụ tupu usoro ọzọ.
PolyJet bụ usoro obibi akwụkwọ 3D ebe obere ụmụ irighiri mmiri nke fotopolymer mmiri na-agbapụta site na ọtụtụ jets jupụta n'elu ikpo okwu ma gwọọ ya n'ígwé na-etolite akụkụ elastomeric.
Ekwesighi voids gụnyere n'otu akụkụ. Porosity nwere ike igosipụta n'ọtụtụ nha na ụdị site n'ọtụtụ ebumnuche. N'ozuzu, akụkụ na-abaghị uru agaghị adị ike karịa akụkụ buru ibu.
Post ọnụ ụzọ ámá
Ọnụ ụzọ ámá pụrụ iche nke na-eji oghere nke ihe ejector pin na-agafe iji gbanye resin n'ime oghere ebu. Nke a na-ahapụ ọkwa post nke na-adịkarị mkpa ka edozi ya.
Ọgwụ na ịkpụzi igwe.
Nke a bụ oghere nke akụrụngwa na-adị ndụ nke dị n'akụkụ axis nke mgbanwe nke akụkụ tụgharịrị, enwere ike iwere ya dị n'akụkụ oghere. Achọrọ etiti oghere ndị a ka ọ gafere akụkụ nke mgbanwe.
Ọnụ ma ọ bụ vertex nke mechiela. A, nke a na-aputa ihe n'akuku geometries dika ihe sitere na usoro imeputa Protolabs. Mgbe a na-ama ụma agbakwunye radius na nsọtụ na akụkụ, a na-ezo aka na ya dị ka fillet.
Usoro mmiri nke na-eme ka ihe nkedo na-aga n'ihu na gbọmgbọm na ike na-amalite n'ime ebu.
Anentation na plastic akụkụ mere site mmetụta nke ejector atụdo.
Wusiri ike resin
Na-ezo aka isi resins na fillers agbakwunye maka ike. Ha na-enwekarị ike ịmalite n'ihi na eriri eriri na-agbaso usoro ndị na-asọpụta, na-akpata nrụgide asymmetric. Mkpụrụ osisi ndị a na-esikwu ike ma sie ike kamakwa ọ na-agbawa agbaji (dịka, esighị ike).
Aha njirimara maka ogige kemịkal nke, mgbe a gbanyere ya, na-emepụta akụkụ plastik. Mgbe ụfọdụ a na - akpọ ya “plastik.”
Ogo nke e biri ebi zuru ezu enweta na akụkụ wuru site mmako n'ichepụta. Usoro dị ka stereolithography na ntụgharị metal laser sintering na-enye ohere maka oke mkpebi dị oke mma yana obere atụmatụ.
Thindị dị mkpa, nke yiri mgbidi ka ọ dị na ntụzi akpụzi ebu, nke a na-ahụkarị na akụkụ plastik ma jiri tinye mgbakwunye nkwado na mgbidi ma ọ bụ ndị isi.
Ọwa nke resin na-esi na sprue na-aga n'ọnụ ụzọ / s. Otutu, ndi n’agba oso yiri, ma dikwa n’ime, nkewa nkewa nke ebu.
Ngwaọrụ dị n'ime gbọmgbọm ahụ nke na - akpọ pịlịk resin arụ ọrụ ka ọ pịa ya ma gbazee ha tupu agbanye ya.
Nhọrọ laser na-emegharị (SLS)
N'oge usoro SLS, laser CO2 na-adọta n'àkwà ọkụ nke thermoplastic ntụ ntụ, ebe ọ na-atụgharị ntụ (fuses) ntụ ntụ siri ike. Mgbe ọ bụla oyi akwa, a roller lays a ọhụrụ oyi akwa nke ntụ ntụ n'elu akwa na usoro akuko.
Ike dị n'agbata resin dị ka ha na-amị onwe ha ma ọ bụ n'elu ebu ahụ. Nsonaazụ esemokwu na-akpata ụfọdụ kpo oku nke resin.
Akụkụ nke jupụtara na resin, na-akpata atụmatụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ na-efu.
Mgbanwe nke akụkụ akụkụ ka ọ na-ajụ oyi n'oge usoro ịkpụzi. Nke a na-atụ anya dabere na ihe onwunwe emeputa na-atụ aro na wuru n'ime ebu imewe tupu n'ichepụta.
Akụkụ nke na-etolite n'ime-oghere n'otu akụkụ site na iweta A-n'akụkụ na B-n'akụkụ na kọntaktị, na-egbochi nsị resin n'ime oghere.
Otu akụkụ nke ebu a na-agbanye n'ime ya ka ebu ahụ na-emechi, na-eji ihe eji eme ihe nkiri cam. Dị ka ọ na-adị, a na-eji omume n'akụkụ iji dozie ụzọ dị n'okpuru, ma ọ bụ oge ụfọdụ iji kwe ka mgbidi na-enweghị atụ na-enweghị mgbidi. Ka ebu ahụ meghere, akụkụ ahụ na-adọpụ n'akụkụ ahụ, na-ekwe ka ewepụ akụkụ ahụ. Na-akpọkwa “cam.”
Dimples ma ọ bụ mgbagha ndị ọzọ dị n'akụkụ nke akụkụ ahụ dị ka akụkụ dị iche iche nke akụkụ ahụ dị jụụ na ọnụego dị iche iche. Ihe ndị a na-ebute oke oke ọkpụrụkpụ ihe.
Achọpụtaghị ihe ndị a na-ahụ anya, nke a na-ahụ anya na akụkụ ahụ, nke mmiri mmiri na-ebido.
Nzọụkwụ mbụ na usoro nkesa resin, ebe resin na-abanye na ebu. The sprue bụ perpendicular ka nkewa ihu nke ebu na-eweta resin ka ndị na-agba ọsọ, nke na-Elezie ke nkewa na-ebupụta nke ebu.
A cylindrical pin maka formatting elu-ikpehe-ruru, obere-dayameta oghere na a akụkụ. Ngwunye nchara siri ike iji dozie nrụgide nke ọpụpụ na elu ya dị larịị iji hapụ ihe dị ọcha site na akụkụ ahụ na-enweghị ederede.
Nchara dị mma
A makwaara dị ka "metal safe" (okwu kachasị mma mgbe ị na-arụ ọrụ na ebu aluminom). Nke a na-ezo aka na mgbanwe nke akụkụ akụkụ nke chọrọ naanị mwepụ nke ọla site na ebu iji mepụta geometry chọrọ. A kachasị mkpa mgbe a akụkụ imewe na-gbanwere mgbe ebu e arụpụtara, n'ihi na mgbe ahụ ebu nwere ike ju karịa kpamkpam re-machined.
Guzo maka Standardkpụrụ maka Exchange nke Data Model Model. Ọ bụ usoro eji eme ihe maka ịgbanwere data CAD.
Igwe Stereolithography (SL)
SL na-eji laser ultraviolet elebara anya na obere isi iji dọrọ n'elu mmiri resin thermoset. Ebe ọ dọtara, mmiri mmiri na-atụgharị na siri ike. A na-eme nke a ugboro ugboro n'akụkụ obe, akụkụ abụọ nwere akụkụ abụọ wee jupụta akụkụ atọ nwere akụkụ dị mgbagwoju anya.
Nsogbu n'oge oge nkedo nke ịkpụzi, ebe akụkụ na-abanye n'otu ma ọ bụ ọkara nke ọzọ, na-eme ka iwepụ sie ike. Nke a bụ okwu nkịtị mgbe anaghị ahaziri akụkụ ahụ na ederede zuru ezu.
A makwaara dị ka "eriri weld" ma ọ bụ "eriri akara," na mgbe ọnụ ụzọ ámá dị ọtụtụ, "akara meld." Ndị a bụ ezughị okè n'akụkụ ebe ihe dị iche iche nke ihe dị jụụ na-ezukọ ma soro na-esonye, ​​na-ebutekarị nkekọ na / ma ọ bụ akara a na-ahụ anya.
Na mbụ ọ pụtara maka "StereoLithography." Ọ bụ a nkịtị format maka ebunye CAD data ka ngwangwa prototyping igwe na-adịghị adabara ọgwụ ịkpụzi.
Kwụ Ọtọ-sere ebu
A na-eji ebu nke na-eji naanị ọkara halves eme ihe dị ka olulu na-agbanye. N'ozuzu, okwu a na-ezo aka n'ebu na-enweghị omume-ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ pụrụ iche ejiri dozie okpuru.
Ọnụ ụzọ taabụ
Oghere oghere kwekọrọ na akara nkewa nke ebu ebe resin na-abanye n'ime oghere ahụ. A na-akpọkwa ndị a dị ka "ọnụ ụzọ ámá" ma na-etinyekarị ya na mpụga akụkụ nke akụkụ ahụ.
Otu atụmatụ agbakwunyere ebu nke a ga-ewepụ site na akụkụ ahụ mgbe ọ kpụchara iji nyere aka n'ịmepụta njedebe na-adịghị mma n'akụkụ ahụ. A na-eme nke a na njikọta ya na oke mmiri iji melite ogo akụkụ ikpeazụ.
Ọnụ ụzọ ámá nke a na-egbutu site na ahụ nke otu akụkụ nke ebu iji mepụta ọnụ ụzọ nke na-ahapụghị akara na mpụta ihu nke akụkụ ahụ.
N'oge usoro ntụgharị, a na-agbanwe ngwaahịa mkpanaka n'ime igwe lathe ebe a na-ejide ngwá ọrụ megide ngwaahịa iji wepu ihe ma mepụta akụkụ cylindrical.
Otu akụkụ nke akụkụ nke na-ese onyinyo akụkụ ọzọ nke akụkụ ahụ, na-ekepụta ihe na-emechi n'etiti akụkụ ahụ na otu ma ọ bụ abụọ nke ebu halves. Otu ihe atụ bụ oghere dị n'akụkụ akụkụ oghere ebu na-agwụ ike n'akụkụ akụkụ. Uwe mkpuchi dị n'okpuru na-egbochi akụkụ ahụ ka ọpụpụ, ma ọ bụ ebu ahụ imeghe, ma ọ bụ abụọ.
Obere obere (0.001 na. Ruo 0.005 na.) Na-emeghe na oghere ebu, nke a na-eme mgbe ọ dị elu ma ọ bụ site na olulu ejector pin, nke a na-eji mee ka ikuku gbapụ site na ebu mgbe a na-agbanye resin ahụ.
Mgbe ịkpụzichara, sistemụ ndị na-agba ọsọ plastik (ma ọ bụ n'ihe banyere ọnụ ụzọ ámá na-ekpo ọkụ, obere dimple nke plastik) ga-anọgide na-ejikọta akụkụ ahụ na ọnọdụ nke ọnụ ụzọ ámá / s. Mgbe a na-emechasị onye na-agba ọsọ (ma ọ bụ na-eme ka dimple dị ọkụ dị obere), obere ezughị okè a na-akpọ "vestige" na-anọgide n'akụkụ ahụ.
Okwu a na-ahụkarị maka ihu nke oghere. Agbanwe agbanwe na mgbidi ọkpụrụkpụ dị mkpa.
Ntughari ma ọ bụ ekwe nke akụkụ ka ọ na-ajụ oyi nke na-esi na nrụgide dị ka akụkụ dị iche iche nke akụkụ ahụ dị jụụ ma belata na ọnụego dị iche iche. Akụkụ nke ejiri resins juputara nwekwara ike ịmalite n'ihi ụzọ ndị na-ekpo ọkụ na-agbakọ n'oge resin. Ndị na-amụ ihe na-agbadata na ọnụego dị iche iche karịa resin matrix ahụ, ma eriri ndị nwere ike ịkọwapụta nsogbu anisotropic.
A makwaara dị ka "eriri stitch" ma ọ bụ "eriri akara," na mgbe ọnụ ụzọ ámá dị ọtụtụ, "akara meld." Ndị a bụ ezughị okè n'akụkụ ebe ihe dị iche iche nke ihe dị jụụ na-ezukọ ma soro na-esonye, ​​na-ebutekarị nkekọ na / ma ọ bụ akara a na-ahụ anya.
Typedị ụdị CAD nke gụnyere naanị akara na eriri, na 2D ma ọ bụ 3D. Wiredị Wirefame adịghị adaba maka ịkpụzi ngwa ngwa.
CNC Prototyping, Otito Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, Fast Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services,